Naya Post Nepal | भा’ईरल बखत बिष्टको कान्छो सिरियल हिट भएपछी अ’र्को श्रीमती चि’नाउदै आए मिडियामा ,बखतले दो’स्रो बिहे ग’रेकै हुन त ? (भिडियो हेर्नुस)
भा’ईरल बखत बिष्टको कान्छो सिरियल हिट भएपछी अ’र्को श्रीमती चि’नाउदै आए मिडियामा ,बखतले दो’स्रो बिहे ग’रेकै हुन त ? (भिडियो हेर्नुस)
पछिल्लो समय युट्युब मा’र्फत भाइरल भएका बखत बिष्ट सा’माजि क सं’जालको दुनियामा आज भा’इरल बनेको व्यक्ति भोलि पल्ट नै गु’मनाम बनेको धेरै उदाहरण छ। तर बखत बि’स्ट भने आफ्नो कला ले गर्दा आज पनि द’र्शक सामु उत्तिकै भा’ईरल छ्न।
बखत बिष्ट आज भोली आफ्नै युटुब च्यानल मा सर्ट फि’ल्म गर्दै आ एका छन , अहिले उनको सिरियल पनि हिट हुँदै ग ईरहेको छ , तेसै क्रम मा रमाइलो कु’राकानी गर्दै जादा कान्छो सिरियल को बुढी र दि दी लाई चिनाउने क्रम मा मिडिया क’र्मी मिलन केसीले तयार पारेको कान्छो सिरियलको बारेमा गरिएको कुराकानी हेरौ
यो पनि,,काठमाडौँ । कुनै पनि ग’र्भव’ती महिलाले आफ्नो स्वास्थ्य जाँ’च गराउन जादाँ आफ्नो गर्भ पा’ठेघरभि’त्र बसेको छ छैन त्यस को समेत प’रिक्षण गराउनु पर्दछ। कतिपय अवस्थामा बच्चा पा’ठेघ रमा नबसी पा’ठेघरबा’हिर ब’सिदिन्छ । जो आमा र बच्चाको स्वा।स्थ्यका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ।
समान्यतया बच्चा पा’ठेघरमा हु’र्किन्छ । तर, पाठेघरमा नबसी पा’ठे घरबा’हिर बच्चा बस्यो भने यो जोखिमयुक्त हुन्छ। पाठेघरबाहिर फ्या ‘लोपियन ट्’युब हुन्छ। धेरैजसो अवस्थामा पा’ठेघरबाहिर बस्ने बच्चा यही ट्युबमा बस्नेगर्छ । यो अवस्था किन ख”तरनाक हुन्छ त ? यस बारे बुझ्न आ’वश्यक छ।
पाठेघरबाहिर रहेको ग’र्भ राम्ररी बढ्न सक्दैन र कुनै पनि बेला यो फु’टेर महिलाको पेटमा रगत जम्नसक्छ। यस्तो अवस्थामा महिला को ज्या’नलाई नै ख”तरा हुनसक्छ।
किन पा’ठेघर बा’हिर बस्छ त बच्चा ?
१) पाठेघरको पहिला सं”क्रमण भएर ट्युबमा क्ष’ति भएमा ।
२) ट्युबको पहिला श’ल्यक्रिया भएमा ।
३) बाँ’झोपनको उपचारबाट ग’र्भ रहेमा ।
४) पहिले पनि पा’ठेघर बाहिर गर्भ रहेको भएमा ।
५) कपर टीको प्रयोग गरेको भएमा ।
महिलाहरूको गर्भावस्था आफैँमा ज’टिल प्र’क्रिया हुने भएकाले यस बारे निकै सचेत हुन आ’वश्यक हुन्छ। किनभने एउटा गर्भ रहँदा त्य हा आमा र बच्चा गरी दुई जीवनको स’वाल हुन्छ।
त्यसैले ग’र्भावस्था’मा कम्तीमा ३ पटक (हरेक तीन महिनाको अन्त रालमा) चि’कित्सकलाई दे’खाउनु उ’पयुक्त हुन्छ।
२०७८ पुष २४, शनिबार प्रकाशित 1 Minute 164 Views